Xalaal Miirasho Mise Xaabaysi! Qalinkii:Axmed C, Kaahin. | WAJAALE NEWS
Xalaal Miirasho Mise Xaabaysi! Qalinkii:Axmed C, Kaahin.
Hadal caan ahaa Oo Culimadii hore o dhan jireen (haddaad habeenkii xaabaysato waxa laga yaabaa in mar uun aad Abeeso qaadato).